IIBHANKI ZASEAZEALIA: ZAPHUKILE NGOKUPHONONONGWA KWEALBHAMU YEXABISO ELIPHANTSI - IINDABA
Waqhekeza ngeNdleko yexabiso
Kwiminyaka emithathu emva kuka-'212 ', u-Azealia Banks uye wakhupha ityala lakhe elifanelekileyo. Kuyo yonke indawo, kunye neendlela ezintsha nezindala kunye nemveliso eqhuba i-gamut esuka kwi-Ariel Pink ukuya kwi-Lone ukuya kwi-AraabMuzik, kwaye isebenza njengoluhlobo lwe-anthology, olugqityiweyo ngokuqaqamba.
Dlala iTrek 'Heavy Metal kunye noJonga' -Iibhanki zeAzealiaUkuhamba SoundCloud Dlala iTrek 'Ukuleqa ixesha' -Iibhanki zeAzealiaUkuhamba SoundCloud
Sele kuyiminyaka emithathu okoko iAzealia Banks yavela eNew York phantsi komhlaba yenziwe ngokupheleleyo ngo '212', umntu ongatshatanga naye ojolise ekulweni. '212' yayiyimbewu yalo lonke uloyiso kunye nobunzima obalandelayo-ubuchule obumangalisayo be-rap, ukugoba uhlobo oluqhelekileyo, kunye nokujongela phantsi igunya. Ekuvukeni kwayo, iiBhanki zitshatile ikhondo lomsebenzi eliqhelekileyo leetalente ezikhulayo. Ulahlile i-mixtape ethembisayo, ebetha-i-jack-pre-albhamu (2012's engapheliyo UFantasea ) kunye ne-compact ethengisa i-EP yemvelaphi ye-brash (2012's nostalgia tripping Ngo-1991 ). Wayehamba ngenkomo yokuvavanya inyama kunye noontanga bakhe. Ama-tiffs ayengakhathalelwanga nje ukuba umculo wawusondla, kwaye okwethutyana umlo ka-Azealia kwindawo yokusekwa kwe-rap wawuphazamisa kakhulu.
I-róisín murphy ruby ​​eluhlaza okwesibhakabhaka
Kodwa njengoko umsebenzi wakhe wokuqala kwiRekhodi ye-Interscope waqala, iiBhanki zabetha indawo eqinileyo. Isivumelwano sibuhlungu njengoko imikhondo yakhe emitsha yadibana nokungakhathali kwiilebheli zonxibelelwano. Ukuziphatha kwakhe ngokungalalanisiyo kwimithombo yeendaba zentlalo kumfake kwizikhewu zombini (Jonga: ukubamba kwakhe ngokungenanceba TI kwaye Iggy Azalea ) kunye nokwenzakalisa (ngelo xesha yena Ukhusele ilungelo lakhe lokubiza uPerez Hilton njenge-gay slur ), kodwa ukugxekwa kwezwi likaBaauer, uPharrell, kunye noKwazisa kwaqala ukubiza ixabiso kubadibanisi bakhe abanenzuzo. Umsebenzi wakhe wokuqala wobubele waphantse wachitha, iiBhanki zagcina zibambe ikhefu: I-Interscope yamvumela ukuba aphume kwisivumelwano sakhe namalungelo kuzo zonke iingoma awayezirekhodile ngexesha lakhe apho. Waqhekeza ngeNdleko yexabiso ifikile kule nyanga inomdla omncinci kakhulu, ukukhutshwa kwayo ubhengezwe nge-tweet elula . Ukuhamba kwayo ixesha elide yeyona nto inokwenzeka. Izinto ezindala zenza iiakhawunti malunga nesiqingatha soluhlu lokulandelwa, kwaye ezinye zazo azenzi myalezo kakuhle ngokuhlaziyeka, izinto ezothusayo ezijikelezileyo. Kuyanceda ukubona Waqhekeza ngeNdleko yexabiso , emva koko, njenge-anthology, iiBhanki eziPhathekayo zeAzealia.
Iingoma ezintathu ngaphakathi, kuyacaca ukuba kutheni i-Interscope ingazi ukuba yenzeni ntoni ngale nto. I-Opener 'Idle Delilah' iyagqabhuka ngokungazenzisi ukuwela izinto zendlu, idubstep, kunye nomculo weCaribbean. Ilandelwa ngu-'Gimme a Chance ', i-bass-heavy post-disco romp ethatha i-hairpin ijike ibe yi-merengue egudileyo phakathi, njengoko iiBhanki zihamba zisuka ekudlwenguleni nasekuculeni ngesiNgesi ukuze ifezekise iSpanish. I-'Desperado 'iboleka isingqi esivela kwi-2000s yasegaraji yase-UK MJ Cole's 'uDesperado Flagman' njengoko iiBhanki zibeka iklinikhi ye-rap, zibeka iintshaba ekuhambeni ngendlela ecocekileyo unokuphoswa yinyani yokuba zonke iziqwenga zemigca nganye. Ilizwi lakhe lihlala lingamandla amanyanisayo avela kwingoma yokulandela umkhondo apha, kwaye kulula ukubona ukoyikeka kwelebheli malunga nokutyhala le nto kubaphulaphuli abangazange bamlandele kuyo yonke intshukumo. 'Nude Beach a Go-Go', umzekelo, ukusebenzisana kwe-albhamu emva kwexesha kunye no-Ariel Pink, yiyo yonke into ekuthiwa yi-fuck mzuzwana ngathi kuvakala ephepheni.
i-pitchfork yeyona albhamu ilungileyo ii-2000s
Ekupheleni Waqhekeza ngeNdleko yexabiso uya kuza ubone iAzealia Banks njengomdanisi weklasikhi ongaphantsi komlilo. Indlela enesakhono kodwa engenangqondo yokuvuma uncuthu lwengoma enzulu esikiweyo 'Soda' kunye 'no-Miss Camaraderie' kunye UFantasea ukubambelela 'kubunewunewu' kunye nomdlalo omkhulu 'wokuSukela ixesha' u-Azealia njengemvumi emfundileyo uRobin S. kunye neTechnotronic. Idityaniswe nezakhono zakhe zemvano-siphuzo ezinamandla, ii-chops zika-Azealia njengendoda esezindlwini zenza isoyikiso sokwenyani esisisongelo esiphindwe kabini. (Ityala libangelwa nguDrake kunye noNicki Minaj, kodwa bobabini bavakala ngokungathi bathathe ingoma becula emsebenzini.) Uyingelosi kwizikhorasi, kodwa kwiivesi eziphakathi, ungumtshabalalisi onamandla omenyezelayo kunye nokuhamba kwakhe ngokungathandabuzekiyo uHarlem.
Umgca weqela phakathi kwe-hip-hop aficionados kukuba i-rap yaseNew York okwangoku ayinayo i-New York. Kukho inyaniso kuyo. Amabali empumelelo esixekweni emva kwexesha abandakanya abahlali abaqhekeza ngo-Apple Big grit kunye neencasa zangaphandle, ukusuka ku-A $ AP Mob yaseTexas ukulungisa isikrweqe ukuya kwi-French Montana yomgibe wesekethe ukuya kwi-day-glo ye-EDM kaNicki Minaj. Kodwa imeko ngo-2014 ayinakubonakala ngathi yenzeka ngo-1994 okanye ngo-2004, kwaye kuya kucaca gca ukuba i-Statlers kunye ne-Waldorfs befuna ixesha elitsha lokubhaptiza abayi kuqaphela iNew York entsha ukuba ithe yenyuka kwaye wabanika i-molly kwindawo yokuhlambela yaseBrooklyn
Ewe, iAzealia Banks yiyo, kwaye Waqhekeza ngeNdleko yexabiso sisikhumbuzo sokuba ikona yaseHarlem ethi uhamba umgama ukusuka eWashington Heights kunye naseBronx, apho kunokwenzeka ukuba uve ihip-hop inyuka ivela kumagumbi kunye neemoto ezidlulayo njengefreestyle, reggaeton, house, okanye bachata. Yindlela engaphantsi komhlaba ehamba ngokukhawuleza ehamba kude neeklabhu zomhlaba apho inkcubeko yebhola iqhubeka khona, kunye namaqela omdaniso ongapheliyo eWebster Hall kunye nokugcwala kweendawo zekonsathi ezisezantsi zeManhattan. Waqhekeza ngeNdleko yexabiso ukutyibilika kuzo zonke ezi zinto, njengololiwe othembekileyo o-1 osampuluweyo kwi-'Desperado '. Zombini iicwecwe kunye nomculi bayaxhamla kwinkululeko yesiXeko saseNew York apho iyantlukwano phakathi kwezi zandi kunye nemiboniso ziye zacotha zacotha.
sebenzisa iigugu, ubize itikiti
olona lawulo luhle lwee-guitar acoustic
Ookumkani beendonga ze-leon bakhulula umhla
Izibane zedolophu imivimbo emhlophe
Freddy gibbs uhlala kuphela i-2wice
kendrick lamar ikhava ye-albhamu
usher ujonge u4